RSS: သင်၏ Feed Link ကိုထင်ရှားအောင်လုပ်ပါ Martech Zone
ဘရောင်ဇာအသစ်များပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်တော့်ကိုထည့်သွင်းရန်စိတ်မဝင်စားပါ RSS ကို ငါ့ site ၏ contents အတွင်း link ကို။ ငါစဉ်းစားရန်စတင်တာပါ။
သင်သတိမပြုမိပါကဤဘရောင်ဇာအသစ်များသည်အလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် RSS ကို နေသမျှကာလပတ်လုံးစာမျက်နှာ၏ header ကိုအတွင်းဖော်ထုတ်နေသမျှအဖြစ်အစာကျွေး။ ကိုနှိပ်ပါ RSS ကို သင်္ကေတသည်သင်၏ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်သင်သည် 'ထိုသတင်းကိုရယူရန်' ဖြစ်ပေါ်စေသည် သင်၏ browser တွင်ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုကိုရွေးသောအခါ၊ အစာမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောတက်ကြွသောဇာတ်လမ်းများစာရင်းနှင့်သင်တွေ့လိမ့်မည်။
browser သည်ထိုကုဒ်ကိုအလိုအလျောက်မြင်ပြီး feed ကိုရယူနိုင်သည်ဟုညွှန်ပြသည်။
Internet Explorer7ဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီ Microsoft သည်အခြား browser developer များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၎င်းတို့အတွက် universal symbol တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် RSS ကို ပါလိမ့်မယ်
ပြီးခဲ့သည့် ၆ လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏အတွင်းပိုင်းကိုအားကိုးခဲ့ရသည် RSS ကို ငါ့အစာကျွေးခြင်းမှ subscribe မှရှေးရှေးများအတွက်ကိုးကား။ သို့သော်မကြာသေးမီကငါထားရှိရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြု၏ RSS ကို ငါ၏အစာမျက်နှာများအားလုံး၏အောက်ခြေအတွက် link ကို။ ဘာလို့ထင်လဲ? စုံတွဲတစ်တွဲရက်အကြာမှာကျွန်မရဲ့ကျွေးမွေးခြင်းခံစာမှာ ၂၀% လောက်တိုးလာတယ်။ (ငါသုံးသည် FeedPress ခြေရာခံရန်) ။
ဒါကသိပ္ပံနည်းကျသိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်စာဖတ်သူတွေကသူတို့ဆီမှာရှိတယ် RSS ကို feed link ကိုခေါင်းစဉ်ကုဒ်မှတဆင့်အလိုအလျောက်မသိရှိနိုင်သောအခြားကိရိယာများကိုအသုံးပြုသောသင်၏စာဖတ်သူများအတွက် feed link ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးရရှိနိုင်ပါသည်။
Tags: လြှောကျလှာအစာfeed header tagfeed link ကိုမင်္ဂလာပါrel alternaterss feed ကိုrss header tagRSS xmlxml
5:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 19
နောက်ထပ်လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်း - တစ်ခါတစ်ရံတွင်စာဖတ်သူများသည်သင်၏ subscription နှင့်ချိတ်ဆက်လိုကြသည်။ ငါစာရင်းသွင်းချင်သောတစ်စုံတစ် ဦး ကိုဖတ်သောအခါ, သူတို့အစာကျွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်စု (Subscribed) နှင့်အတူတစ်နေ့အဘို့အကြှနျုပျ၏လင့်များအတွက်သူတို့ကိုမကြာခဏထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ Firefox2တွင်ကျွန်ုပ်သည် FeedDemon သို့တိုက်ရိုက်သွားရန် feeds ကိုပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။ စာမျက်နှာပေါ်တွင် link မရှိပါကကျွန်ုပ်သည် link ကို right-click နှိပ်၍ ကူးယူနိုင်ပါက၎င်းကိုရရှိရန်ကြည့်ရန် Source ကိုကြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
5:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 08
ဒါကအောက်ခြေရှိ RSS icon မှတစ်ဆင့်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုကျွန်တော်စာရင်းသွင်းလိုက်သည်။ ဘရောင်ဇာကိုသုံးသောအခါအညွှန်းများဘာမျှမဟုတ်ဘဲဘရောင်ဇာအသုံးပြုသည့်အခါမည်သည့်ညွှန်ကိန်းကိုကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ကျွန်တော်မကြာခဏ Icon ကိုရှာသည်။
မှတ်ထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့လူတိုင်းဘရောင်ဇာမှဘလော့ဂ်ကိုလာကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သည်၎င်းတို့၏ browser မဟုတ်သည့် RSS client များမှ link များမှတဆင့်လာကြလိမ့်မည်၊ ၎င်းတွင် built-in browser ၏ browser သည်ဤနည်းကိုတွေ့နိုင်ခဲသည်။
5:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 12
၎င်းသည်ငါရေးခဲ့ဖူးသည့် RSS icon link ဖြစ်သည်။ ဤအတွက် addressbar ကိုဘယ်တော့မှဂရုမစိုက်သည့်အပြင်ဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်ပုံမှန်စာရင်းသွင်းခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ RSS စာဖတ်သူတွင်နေထိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လင့်များအားလုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်ထိုလမ်းကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်သော RSS client အနည်းငယ်သာထိုအင်္ဂါရပ်မျိုးရှိသည်။
ဇန်နဝါရီ 6, 2007 မှာ 12: 38 AM
Doug, ငါသည်သင်တို့ကိုဒီတစ်ခုအပေါ်အပြည့်အဝပါပဲ! ငါ့ RSS Button of Love အသစ် on ပေါ်တွင်တင် did ရေး🙂ခဲ့သည်🙂
ကောင်းသောအချက် Sterling ငါတစ်ခါတစ်ရံအတူတူလုပ်ပါ။
6:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 59
ကောင်းသောအကြံဥာဏ်, ငါယခုနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ရရှိပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 9, 2007 မှာ 3: 53 AM
ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါပြီးခဲ့သည့်လကအခြားဘလော့ဂါတစ် ဦး နှင့်ဤအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ စာရင်းသွင်းခြင်းခလုတ်ကိုထည့်ရန်မည်သည့်နေရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုအစဉ်အမြဲစဉ်းစားခဲ့သည်။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် browser ၏လိပ်စာနှင့်အောက်ခြေရှိ RSS အိုင်ကွန်သာရှိသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်ထင်မြင်ချက်များကို အခြေခံ၍ sidebar သို့မဟုတ် header ထဲတွင်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
11:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 48